China High-ịrị elu ígwè ulo factory na-emepụta | Honghua
Guangdong GoTone ụlọ (Adreesị ọhụrụ) N'ịdị ntọala siri ike, a na-ewu osisi na ogidi iji mechie oge etinyere n'ihi ibu. Nkwado dị n'akụkụ nke osisi siri ike dabere na ekwe ekwe nke ogidi, akwa na njikọ na ụgbọelu
Guangdong Gotone ụlọ (adreesị ọhụrụ) dị n'etiti Zhujiang New Town, Guangzhou. Ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa ọhụrụ maka China Mobile (Guangdong) Company.
Ulo owuwu: Guangdong Mobile Communication Co., Ltd.
Institutionlọ ọrụ nhazi: Guangdong Institute of Architectural Design and Research;
Ọnọdụ: HuaxiaRoad, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City;
Ofbọchị mmeghe na mmezu nke nkwekọrịta ahụ: Eprel 23, 2006 - Eprel 23, 2009
Ofdị ihe owuwu: ịkwa osisi
Mpaghara ụlọ: 121,547 square mita
Ọnụ ọgụgụ ala: 37 n'elu ala, 3 n'okpuru ala
Ogologo ụlọ: 165.2 m
Nkwalite oru ngo:
Towerlọ elu ụwa ọhụrụ ahụ guzo nso Huaxia Road na isi mpaghara Zhujiang New Town, Guangzhou. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụlọ elu na uwe mwụda mebere.
Ejiri ụlọ ọrụ ndị ama ama (na-abụghị ndị na-ewu ihe owuwu) tinye ego ụlọ Gotone Tower ọhụrụ na Zhujiang New Town. A na-etinye ya dịka otu n'ime ụlọ ndị ama ama na Guangzhou na Zhujiang New Town. Gotlọ Gotone nwere ala 3 n'okpuru ala, ala 37 dị n'elu ala, ọkachasị gụnyere mpaghara ọrụ, dị ka njikwa ụlọ ọrụ, nkwukọrịta nkwukọrịta, ụlọ ngosi ihe ngosi, ala egwuregwu na ogige nke etiti. Ulo ala na-ekpuchi ihe dịka square mita 16,640. Ọ bụ obi ọrụ nke China Mobile na Guangdong Province na nkwado nkwukọrịta nkwado maka 2010 Guangzhou Asia Games.
Iji rube isi na ọkwa dị elu nke nnukwu ụlọ ọrụ ya dị elu, ime ya na-eji ihe eji eme ihe dị elu. Requiredlọ a chọrọ ụlọ ọrụ ndị metụtara elu dị elu, ọkachasị dị ka usoro njikwa etiti ụwa zuru ụwa ọnụ, ga-abụrịrị usoro siri ike ma kwụsie ike, ya mere, Globa lBuilding ọhụrụ họọrọ Crestron Central Control System. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ọkwa kachasị elu, teknụzụ tozuru etozu, ọrụ zuru oke, nke a kacha eji eme ihe, bụ ịghọta usoro ụlọ ọrụ nke njikwa etiti na njikwa ọgụgụ isi nke ngwa elektrọnik dị iche iche na nchịkwa mmadụ.
Dị ka nkwukọrịta nkwukọrịta na ebe etiti iwu nke egwuregwu 2010 Asia, Global Tower na-akwado ikuku na-arụ ọrụ ikuku na gburugburu ebe obibi, ma na-etinye teknụzụ ọhụrụ dị iche iche, ihe ọhụrụ na teknụzụ ọhụụ na nkọwa niile nke ụlọ ahụ. Lọ ahụ nwere ọrụ zuru ezu, ma jikọtara gburugburu ebe obibi, nke mmadụ, ọgụgụ isi, nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Isii siri guzobe usoro
N'ime usoro siri ike, a na-eji osisi na ogidi rụọ ọrụ iji kwado oge etinyere n'ihi ibu.
Nkwado dị n'akụkụ nke osisi siri ike dabere na ekwe ekwe nke ogidi, akwa na njikọ na ụgbọelu
O kwesịrị ekwesị maka ụlọ ndị e wusiri ike.
Enwere ike iji ya rụọ ụlọ nchara, mana njikọ ga-efu ọnụ.
Otu uru dị na osisi na-agbanwe agbanwe bụ na ọ ga-ekwe omume ịhazi na windo windo n'ihi nhazi akụkụ anọ.
Ndị nwere sistemụ siri ike na-anagide oge oge, ike ịkwa osisi, na ibu axial.
Enwere ike iji ụlọ osisi siri ike rụọ ụlọ iri abụọ ruo iri abụọ na ise.
Uru nke esemokwu siri ike gụnyere ịdị mfe nke nrụpụta, ndị ọrụ nwere ike ịmụ ọrụ nka ngwa ngwa, rụọ ngwa ngwa, ma nwee ike ịhazi akụ na ụba.
Oke kachasị dị ogologo bụ 12.2m ma nnukwu ogwe osisi ga-ata ahụhụ n'akụkụ.
A mwepu bụ na onwe-ibu na-guzogidere site si isiike okpokolo agba.
N'ikpeazụ, e ji usoro siri ike wuo Burj Al Khalifa nke bụ usoro kachasị elu n'ụwa.
Nke gara aga: Prefabricated n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ígwè Ọdịdị
Osote: High ịrị elu ígwè azụmahịa ụlọ